Ardayda qaaliga ahow, waxaan casharkaan ku arki doonaa isku xirayaasha Jarmalka (Konjunktionen). Isku xirnaantu waa ereyo isku xiraya laba eray ama in ka badan. Isku xirnaaduhu wuxuu xiriirin karaa oo keliya ereyada laakiin sidoo kale weedhaha.
Waxaan kugula talineynaa inaad si taxadar leh u baarto casharkeena cajiibka ah ee isku xirka Jarmalka (Konjunktionen). Tababarayaasha Almancax ayaa kuu diyaar garoobay. Mawduuca isku xirka Jarmalka waa mid ka mid ah mowduucyada u baahan in si fiican looga barto marka la eego sameynta saxda ah ee jumladaha Jarmalka iyo kala duwanaanshaha jumlada. Mawduuca isku xirayaasha Jarmalka waxaa badanaa la baraa inaysan bilaabin inay bartaan Jarmalka, laakiin kuwa leh wax yar oo aasaasi ah oo heer Jarmal dhexdhexaad ah.
Marka loo eego manhajka waxbarasho ee dalkeena, kaliya “ve""laDhowr isku xirnaansho sida ”waxaa lagu dhigaa fasallada 9aad iyo 10aad, isku xirnaanshaha kale waxaa lagu dhigaa fasallada 11aad iyo 12aad.
Hadda aan bilowno mawduuceena loo yaqaan 'conjunctions' ee Jarmalka. Mawduuca isku xirka Jarmalka, waxaan arki doonaa iskudhafka ugu badan ee Jarmalka lagu isticmaalo. Waxaan dhisi doonnaa jumlado muunad ah oo kusaabsan isku xirnaansho kasta oo waxaan dhameystiri doonnaa mowduuceena.
Jarmal iyo isku xirnaan
Isku xira Und : Und waxaa loola jeedaa "iyo". Adeegsigeedu waa sida afka Turkiga iyo isku xirnaanta. Adeegsiga laba eray ama ka badan, tusaale ahaan laba fal ama in ka badan, sifooyin, magacyo, iwm. waxayna u adeegtaa iskuxirka laba jumlad. Tusaalooyinka jumladaha ku saabsan iskuxirka Jarmalka iyo hoos ayaa lagu bixiyay hoos.
Muharrem iyo Meryem kommen.
Muharram iyo Meryem ayaa imanaya.
Ayuu yidhi und Hamza sprechen und kommen.
Saciid iyo Xamza ayaa sheekaysanaya soona socda.
Das Buch und das Heft sind qudhun.
Buugga iyo buuggu waa casaan.
Das Buch waa qudhuntay.
Buuggu waa jaalle iyo casaan.
Jarmalka sowohl… .. als isku xira, sowohl… .. wie isku xira
sowohl… .. als isku xira, sowohl… .. wie isku xira Maaddaama labadan isku xirni macnahoodu yahay isku mid, waxaan kula macaamiloonnay isla macnaha. Labadan isku xirnaansho micnaheedu waa "labadaba… .. iyo". Isticmaalkoodu waa isku mid. Mid ayaa loo isticmaali karaa halkii kan kale. Hoos ka eeg jumladaha tusaalaha ah ee ku saabsan isku xirnaantaan.
Efe iyo Mustafa labadaba way imanayaan.
Labada socod iyo wada hadalba.
Walaalkey wuxuu ku hadlaa labada turki iyo jarmal.
Der Ball waa mid aad u qurux badan.
Kubaddu waa jaalle iyo casaan labadaba.
Iskuxirka Jarmalka oder
iskuxirka oder : Oder waxaa loola jeedaa iskuxirid ama (ama). Adeegsigeedu waa sida afka Turkiga. Hoosta, waxaan kusoo bandhigeynaa jumlado muunad ah oo kusaabsan iskuxirka oder Jarmal ee isticmaalkaaga.
Bisadu waa jaalle ama caddaan.
Waxaan tagayaa berri ama berri kadib.
Muharrem wuxuu kubbaday koleyga ama heesta.
Muharrem wuxuu ciyaaraa kubbadda koleyga ama wuu heesaa.
Mein Vater kauft das Brot ama das Gebäck.
Aabbahay wuxuu soo iibsadaa rooti ama buskud.
Iskuxirka aber Jarmal
isku xidhka aber : Aber isku xirka laakiin-laakiin-lakin waxaa loo turjumay af turki. Isticmaalkeeda guud waxay la mid tahay tan Turkiga. Badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro laba jumlad. Marka la isku xidhayo laba weedho, comma ayaa la adeegsadaa kahor isku xidhka aber. Weedho muunad ah oo aan ka diyaarinay iskudhafka aber Jarmalka ayaa laga heli karaa hoosta.
Das Auto ist grün, waa aber das Rad ist blau.
Gaarigu waa cagaar yahay laakiin baaskiilku waa buluug.
Walaashay way hadlaysaa laakiin ma dhagaysanayso.
Waan jeclahay inaan akhriyo buugaagta laakiin ma jecli inaan dhagaysto muusikada
Waan socon karaa laakiin ma ordi karo.
Isku xirka sondern Jarmalka
isku xiraha kama dambaysta ah : Ereyga isku-xirnaanta, liddi ku ah, macnaheedu waa ka soo horjeedka. Wuxuu isku xiraa laba weedho. Waxaad ka heli kartaa weedho muunad ah oo ay qoreen kooxda almancax oo ku saabsan isku xidhka ugu dambeeya.
Der Tisch ist nicht blau, sondern qudhun
Miiska ma aha buluug, laakiin waa casaan.
Ahmet ist nicht im Garten, ugu dambayntii er ist in der Schule.
Ahmet kuma jiro beerta, taa bedelkeedana wuxuu ku jiraa dugsiga.
Das ist nicht Ahmet, Hasankii ugu dambeeyay.
Kani maahan Ahmet, ee caksigeeda, waa Hasan.
Meine Mutter aad ayaan ugu faraxsanahay.
Hooyaday ma imaaneyso, cagsigeeda, way tagaysaa.
Iskuxirka Jarmalka denn
isku xira denn : Denn conjunction waxaa loola jeedaa maxaa yeelay waxay badanaa isku xirtaa laba weedho. Kooxda almancax waxay kuu diyaariyeen xoogaa jumlado ah oo ku saabsan isku xidhka denn ee Jarmalka adiga. Tijaabi weedhaha hoose.
Ma ordi karo maanta sababtoo ah waan daalay.
Waan ka xumahay, wax walbana waxay ku ciyaaraan Fußball.
Waan dhididaa maxaa yeelay waxaan ciyaarayaa kubada cagta.
Lara kann kein Auto kaufen, denn sie koofiyadda kein Geld.
Lara ma iibsan karto gaari maxaa yeelay lacag ma haysato.
Runtii waa wax aan la aqbali karin.
Ma aqriyo buugaagta sababtoo ah ma jecli inaan wax akhriyo.
Ardayda qaaliga ah, ereyada ama weedhaha aan ugu yeerno isku xirnaanta waxay gacan ka geysanayaan isku xirnaanta weedhaha. Jarmalka Iskuxiraha Waa noocyo kala duwan marka loo eego weedhaha ay ku jiraan iyo kuwa lagu kala saaray. Iskuxirayaasha qaar, gaar ahaan Jarmalka, ma lahan wax u dhigma Turkiga.
Kahor intaanan dhammeyn mowduuca Wadajirka Jarmalka, waxaan ku siin doonaa macluumaad faahfaahsan iyo miisas yar oo loogu talagalay asxaabta horumarsan. Saaxiibbada hadda bilaabaya barashada Jarmalka ama barashada isku xirnaanta Jarmalka uma baahna inay helaan macluumaadka soo socda. Macluumaadka aan kor ku soo sheegnay waa ku filan yihiin. Hadda, aan siino xoogaa macluumaad kooban oo ku saabsan noocyada isku xirnaanta Jarmalka.
Iskuxirnayaasha Kala Saaraya Ereyada Isku Nooca Ah (Nebenordnende Conjunctionen)
Isku xirnaanta kooxdan ayaa mas'uul ka ah isku xirka ereyada ama jumladaha isku nooc ah. Dhismaha xukunku wuxuu la mid yahay weedha aasaasiga ah.
Iskuxirka Jarmalka Waxaa loola jeedaa af Turki
godka maxaa yeelay,
sondern on lid ku ah / halkii
iyo ve oder Waxaa loo isticmaalaa kooma la'aan halka laga doorbidayo qodobo qasab ah.
denn aber sondern doch Markii la isticmaalo, weedhaha waxaa lagu kala qaadaa koomayaal.
aber sondern doch isku xirnaanta waxaa loo isticmaalaa in lagu kala saaro jumladaha aasaasiga ah.
godka Iskuxiraha waxaa loo isticmaalaa oo kaliya iskuxirka ereyada ama jumladaha weedha weyn.
Muuqaal kale ayaa ah in marka maadada ama falka loo adeegsaday jumlada labaad ay isku mid tahay, soo noqnoqoshada looma baahna.
Xukunnada oo la adeegsanayo in ka badan Hal Macne
Isku xidhka kooxdani waxay kaloo kaa caawinayaan isku xidhka ereyada isku nooc ah. Nebenordnende Conjunctionen ayaa lagu tiriyaa kooxda. Iskuxirayaashan sida caadiga ah loo isticmaalo Jarmalka ayaa hoos ku qoran.
soo dejiye… oder ka waran ... ya
sowohl… als auch Ka sokow
weder… noch ayeeyo
zwar ... aber … Laakiin…
nicht nur… sondern auch kaliya maahan… laakiin sidoo kale
Iskuxirayaasha Kala Saaraya Noocyada Kala Duwan ee Ereyada (Unterordnende Conjunctionen)
Isku xidhka kooxdan ayaa mas'uul ka ah isku xidhka weedhaha waaweyn iyo weedhaha ka hooseeya. Waxaa jira sharci lagu kala saarayo koomaha jumladaha noocaas ah.
cabaad Sida ugu dhakhsaha badan
Weil maxaa yeelay,
Waan nachdem intaas kadib
ilaa hadda ilaa iyo hadda
hoos u dhacdo haddii
inta inta lagu guda jiro
ob ha ahaato ama yaanay ahayn
damin sidaas / waayo
ka hor la'aan
magdhaw inta lagu jiro / inta
ka badan -markii
Solange Long Inta
seit/seitdem tan iyo
Loo adeegsaday isku xir ahaan ereyada gogol dhigga;
Diyaarinta Jarmalka Waxaa loola jeedaa af Turki
ausserdem sidoo kale
deswegen taas awgeed
beziehungsweis in halkii
genauso si la mid ah
Dann ka dib / ka dib
waxaan trotzdem si kastaba ha noqotee
Saaxiibbada qaaliga ah, kani wuxuu ahaa dhammaan macluumaadka aan ka siin doonno mawduuca isku xirnaanta Jarmalka. Waxaan aragnay labadaba iskuxirayaasha Jarmalka ee aadka loo isticmaalay waxaanan sameynay jumlado badan oo muunad ah oo laxidhiidha iskuxirayaashan. Anagoo ah kooxda almancax, waxaan sii wadeynaa inaan kuu soo saarno waxyaabo asal ah oo aan adiga meelna ka heli karin. Adiga ayaa abuuri kara jumlado kala duwan oo aad ku hagaajin kartid luqaddaada ajnabiga ah iyadoo lagu saleynayo tusaalaha weedhaha Jarmalka ee kor ku xusan.
# Jarmal iyo isku xirnaan
# Jarmalka sowohl… .. als isku xira, sowohl… .. wie isku xira
# Iskuxirka Jarmalka oder
# Iskuxirka aber Jarmal
# Isku xirka sondern Jarmalka
# Iskuxirka Jarmalka denn
# Iskuxirnayaasha Kala Saaraya Ereyada Isku Nooca Ah (Nebenordnende Conjunctionen)
# Xukunnada oo la adeegsanayo in ka badan Hal Macne
# Iskuxirayaasha Kala Saaraya Noocyada Kala Duwan ee Ereyada (Unterordnende Conjunctionen)